Motorola One Zoom: sivana amin'ny sivilizasiona feno | Androidsis
Mihombo hatrany ny isan'ireo telefaona Motorola One. Andro vitsy lasa izay, ny One Action dia natomboka tany Espana, miaraka amin'ny fakantsary mihetsika. Ho fanampin'ny fampiasa mandritra ny roa volana ny Fahitana Iray. Ny marika dia manana maodely vaovao vonona, izay antenaina ho ofisialy amin'ny IFA 2019. Amin'ity tranga ity dia ny Motorola One Zoom, izay efa navoaka ny tsipiriany.
Mitady ny Motorola One Zoom manjary lasa maodelin'ny fanovozan-kevitra eo amin'ny sehatry ny sary ho an'ny orinasa. Ity dia zavatra iray izay hitantsika amin'ny endriny sy ny mombamomba azy. Ka telefaona iray izay mety misy lanjany lehibe amin'ny Motorola.
Eo anoloana no ahitantsika a famolavolana miaraka amin'ny notch amin'ny endrika rano indray mitete amin'ity tranga ity. Volavola izay hitantsika hatrany eny an-tsena, saingy tiantsika ary mandeha tsara izy io. Ny ao aoriany dia misy ny tsy ampoizina, miaraka amina sensor efatra, milahatra amin'ny kianja iray. Ny sensor sensor an'ny rantsantanana dia tazonina ao aoriana, ao ambanin'ny fakantsary amin'ny telefaona.
Famaritana Motorola One Zoom
Ny Motorola One Zoom dia hisongadina indrindra amin'ny fakantsary rehetra, ity dia zavatra efa fantatra. Araka ny fantatsika avy amin'ny anaran'izy ireo, ny zon'izy ireo dia iray amin'ireo fiasa lehibe ao amin'ity telefaona ity. Azonao atao ny mahita azy io amin'ny specs an'ny fitaovana, izay efa tafaporitsaka tanteraka. Ireto misy toy izao:
Display: 6.4-inch AMOLED misy vahaolana: 2340 x 1080 teboka
Fitahirizana anatiny: 128 GB (Azo zahana amin'ny karatra microSD hatramin'ny 1 TB)
Fakan-tsary Rear: 48 MP misy vava f / 1.7 PDAF OIS Angular + 16 MP Wide zoro + 8 MP misy vava f / 2.4 5x hybrid telephoto + 5 MP misy vava f / 2.2
fakan-tsary Firaka: 25 Mpx miaraka amina aperture f / 2.0
Rafitra fandidiana: Android 9 Pie
bateria: 4.000 mAh misy fiampangana haingana 18 W
Conectividad: WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, Radio FM, Jack 3.5 mm, A-GPS, GLONASS, GALILEO, NFC, USB 2.0 Type C
ny hafa: Mpamaky rantsan-tànana any aoriana, fiarovana fiarovana splash IP52
Ny marika dia mamela antsika modely ao afovoany, Powered by Snapdragon 675 amin'ity lafiny ity amin'ny maha-processeur anao. Izy io dia iray amin'ireo chips malaza indrindra amin'ity sehatry ny tsena ity, izay hitantsika amin'ny fitaovana maro tato anatin'ny volana. Ka antoka ao anatin'ny elanelam-potoana io. Izy io dia miaraka amina fitambarana RAM sy fitehirizana tokana ary hitantsika fa hampiasa bateria mahazaka 4.000 mAh izy io.
Ny Motorola One Zoom dia misy fakan-tsary efatra ao aoriana. Ny sensor voalohany dia 48 MP amin'ity tranga ity, na dia ny zoom aza dia iray amin'ireo mpandray anjara fototra amin'ity tranga ity. Satria manana zoom hybrid 5x izy io, izay mitovy amin'ilay ananantsika ao amin'ny Mate 20 Pro. Ka ity finday ity dia hahafahantsika maka sary tsara miaraka amin'ny zoom, tsy misy fatiantoka kalitao ao amin'izy ireo. Ity dia mety hanampy azy io ho iray amin'ireo maodely salantsalany fakan-tsary eo an-tsena.
Iray amin'ireo fisalasalana momba ity Motorola One Zoom ity dia ny hoe hampiasa Android One ho rafitra fiasa ianao na tsia. Ny antony dia satria efa hita, araka ny hitanao amin'ity sary etsy ambony ity, fa ho tonga miaraka amin'i Alexa ho toy ny mahazatra ny fitaovana, mpanampy an'i Amazon. Noho izany, maro no manontany tena raha mbola hampiasa Android One ity maodely ity toa ny ambin'ilay faritra. Fa raha tsy tena ampiasainao io dia mahalana vao antsoina hoe Iray, satria toa natao ho an'ny telefaona Android One ihany io faritra io.
Tsy misy pitsony manokana momba ny fandefasana ilay fitaovana amin'izao fotoana izao. Voalaza fa ny vidin'ity Motorola One Zoom ity dia 399 euro, amin'ny fampifangaroana RAM sy fitehirizana tsy manam-paharoa. Tokony ho fantatsika izany rehetra izany momba ny telefaona ao amin'ny IFA 2019 amin'ity herinandro ity manomboka izao, ka hojerentsika ny fampisehoana ofisialy azy. Inona no fahatsapana avelan'ity antonony eo aminao ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Navoaka ny famaritana Motorola One Zoom
Ny fepetra voalohany amin'ny Galaxy M30 dia voasivana